Sir Ba 's Note ဆြာဘရဲ့မှတ်စု
မြန်မာ့မြို့ရွာ အမည်များ - လှသမိန်
Happy Myanmar New Year !!!!!
🌟Year 2016，Myanmar New Year🎵 ✨
✨🌵 ကျန်းမာခြင်း⛵🎏 ✨
✨💐 ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်း🚀 ✨
✨🌷 ပျော်ရွှင်ခြင်း🌅 🎆 ✨
✨🍀ချစ်သူခင်သူပေါများခြင်း🌈 🎑 ✨
✨🌺 စိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့ခြင်း😄 💪 ✨
✨🌻 ကြံစဉ်သမျှအောင်မြင်ခြင်း🎉 🎯 ✨
✨🌹 အလှူရေစက်လက်နှင့်မကွာ လှူတန်းနိုင်ခြင်း🙏 🎇 ✨
✨💐 လာဘ်လာဘကြွယ်ဝခြင်း 💰 ✨🌷 🎎 ✨
✨☀ 🙌 🈵 ✨အပေါင်းနှင့်နှစ်
✨🌸 ဆုမွန်ကောင်းခြွေပါတယ်👏 🎰 ✨🌺 🉐 ☀✨🍀 🎐 👍 ✨
ပျော်ရွှင်စရာ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ 🎁🎁
ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက် ပြောတဲ့ မှတ်သားစရာ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုငါးရပ် (PQ IQ EQ SQ CQ)
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုကို သာမန်အားဖြင့် (IQ) နဲ့တိုင်းထွာလေ့ရှိပါတယ်။ အပြည့် အစုံကတော့ Intelligence Quotient (IQ) ဖြစ်တယ်။ လူတစ်ဦးရဲ့ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုကို စနစ်တ ကျတိုင်းထွာပြီး ရလာတဲ့အဖြေ Quotient ကို ရည်ညွှန်းပြီးသတ်မှတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လွယ်လွယ်ပြောရရင် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သူကို တော်တဲ့သူလို့သတ်မှတ်ကြတယ်။ IQ မြင့်တဲ့သူဟာ တော်တယ်။ IQ နိမ့်တဲ့သူဟာ ညံ့တယ်လို့ပဲ ယူဆကြတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာတော့ IQ ကို စနစ်တကျတိုင်း ထွာမှုတွေလုပ်ကြတယ်။
မြန်မာပြည်မှာတော့ ကျွန်တော်သိသလောက် စနစ်တကျလုပ်ထားတာမရှိ ဘူး။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ IQ ဟာ ပျမ်းမျှခြင်း ၈၀ နဲ့ ၁၂၀ အကြားရှိကြတယ်။ ၁၂၀ ထက်များရင် သိပ်ထူးချွန်တယ်လို့ သတ်မှတ်ပြီး ၈၀ ထက်နည်းရင်တော့ ဉာဏ်ရည်နိမ့်တယ်လို့ ပြောလေ့ရှိကြ တယ်။ IQ ဟာ ဗီဇအပေါ်အခြေခံတယ်။ တစ်နည်းပြောရရင် မိဘမျိုးရိုးအပေါ် မူတည်ပါတယ်။
IQ ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာ မွေးတဲ့အချိန်ကအစပြုပြီး အသက် ၁၁ နှစ်နဲ့ ၁၂ နှစ်မှာ မြင့်တက်လာပြီး နောက်ပိုင်းမှာ တိုးတက်မှုမရှိတော့တာ တွေ့ရပါတယ်။ တစ်နည်းပြောရင် IQ ဟာ မွေးရာပါအရည်အချင်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။
IQ ကိုတစ်ဖက်က Mental Intelligence ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုလို့ ဆိုကြတယ်။ သမားရိုးကျပညာ ရေးစနစ်ဟာ IQ ကိုသာ အာရုံစိုက်တာတွေ့ရတယ်။ ကျောင်းစာမှာတော်ဖို့ မိဘတွေရော၊ ဆရာ၊ ဆရာမတွေပါ တိုက်တွန်းတယ်။ စာတော်ခြင်းတစ်ခုတည်းကိုသာ အလေးထားကြတယ်။ ဒါကြောင့် လည်း အားကစားမလုပ်ဖို့၊ အနုပညာမလိုက်စားဖို့၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုမှာ အာရုံမစိုက်ဖို့တိုက်တွန်း ပြီးစာတော်ခြင်းဆိုတဲ့ တစ်လမ်းသွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို အားပေးခဲ့ကြတယ်။
အခုခေတ်မှာတော့ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှု ငါးမျိုးရှိတယ်လို့ လက်ခံလာကြတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ ဒီဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုငါးမျိုးကို ပြုစုဖို့လိုအပ်တယ်လို့ လက်ခံလာခဲ့တယ်။
ပထမဆုံးဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုကတော့ Physical Intelligence (PQ) ဖြစ်ပါတယ်။ ရုတ်တရက် ကြည့်ရင် (PI) ဖြစ်သင့်တယ်လို့ ထင်ကြမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်စောစောက ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သလို Quotient ဆိုတဲ့ရလဒ်အဖြေကို ရည်ညွှန်းတာပါ။ PQ ကအမှန်တော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တယ်။ လူတစ် ယောက်ဟာ ကျန်းမာဖို့လိုအပ်တယ်။ မကျန်းမာရင် ကျန်တာဘာမျှလုပ်လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ ကြောင့်ကျွန်တော်က လူငယ်တွေအအနေနဲ့ PQ ကိုအာရုံစိုက်စေချင်တယ်။ မိဘတွေအတွက်လည်း စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ကလေးတွေကို အားကစားလုပ်ဖို့ အားပေးရမယ်။ ကျောင်းတွေမှာလည်း အားက စားကိုထိထိရောက်ရောက် လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ အရေးကြီးလှပါတယ်။
တစ်ချိန်တုန်းက အားကစားကို အားမပေးခဲ့ဘူး။ မလိုအပ်တဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေကြောင့် အားကစားလုပ်တာ တွေကို အဟန့်အတားပြုခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ လူငယ်တွေအတွက် အားကစားမြှင့် တင်မှုကို အမျိုးသားရေးတာဝန်တစ်ရပ်အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ရမယ်။ တစ်ခါကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သလို အားကစားလုပ်ခြင်းဟာ ကာယဖွံ့ဖြိုးမှုသာမက ပြိုင်ဘက်ကိုလေးစားမှု၊ အရှုံးအနိုင်ကို မှန်ကန်တဲ့ တုံ့ပြန်နိုင်မှု၊ နားလည်မှုစတဲ့ အကျိုးတရားတွေဟာ ရေတွက်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ အားကစားလို့ပြောတဲ့နေ ရာမှာလည်း ငွေကုန်ကြေးကျများတဲ့ အားကစားမျိုးကိုသာမဟုတ်ဘဲ လူတိုင်းလက်လှမ်းမီတဲ့ အားက စားတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ဒုတိယဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုက စောစောကအသေးစိတ်တင်ပြပြီးဖြစ် တဲ့ Mental Intelligence (IQ) ဖြစ်ပါတယ်။
တတိယဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုက Emotional Intelligence (EQ) ဖြစ်ပါတယ်။
EQ ကမိမိအကြောင်း၊ မိမိရဲ့ခံစားမှု၊ မိမိရဲ့စိတ်ကို သိသလိုမိမိနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတဲ့သူတွေအကြောင်းကိုလည်း သိ အောင်ကြိုးစားနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ EQ မြင့်မားတဲ့သူဟာ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးသာဓကက ဆရာကြီး Gandhi ဖြစ်ပါတယ်။ သူကသူ့ရဲ့တပည့်တွေနဲ့အတူ ဘူတာရုံတစ် ခုက ထွက်တော့မယ့်ရထားကို အမီလိုက်ရင်း စီးလာတဲ့ဖိနပ်တစ်ဖက် ကျွတ်ကျခဲ့တယ်။ ဖိနပ်ကျွတ် တာကိုသိသိချင်း ဆရာကြီးက ကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကိုယူပြီး ကျသွားတဲ့ဖိနပ်နဲ့ အနီးဆုံးရောက်အောင် ပစ်လိုက်တယ်။ သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်ကို တပည့်တွေက ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်လိုက်တာလဲလို့ပြောတော့ အခုဆိုရင် ကောက်ရတဲ့သူက ဖိနပ်တစ်ရန်အပြည့်ရပြီလို့ ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ IQ မြင့်မားတဲ့သူတွေတိုင်း EQ မမြင့်ကြပါဘူး။ IQ မြင့်ပေမယ့် EQ နိမ့်တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိတာတွေ့ရတယ်။။ မိမိရဲ့ခံစားမှုတွေ သာရှေ့တန်းတင်ပြီး တစ်ဖက်သားရဲ့အကြောင်း ထည့်မတွက်တတ်တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိနေတာ ဝမ်းနည်းစရာတွေ့ရပါတယ်။
တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ IQ ဟာမွေးရာပါဖြစ်ပေမယ့် EQ ကတော့ပြုစုလို့ရတဲ့ အရည်အချင်းတစ်ရပ် ဖြစ်တယ်။ ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့ IQ တစ်ခုတည်းအားကိုးလို့မဖြစ်ဘူး။ EQ ရှိမှပြည့်စုံမှာ။ တစ်ဖက်က တော့ EQ သာရှိပြီး IQ နိမ့်နေရင်လည်း အဆင်မပြေပြန်ဘူး။
စတုတ္ထဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုက ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပါတယ်။ တစ်နည်းပြောရရင် Spiritual Intelligence (SQ) ဖြစ်တယ်။ အခုအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ SQ အထူးလိုအပ်နေ တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဟာ မိမိတစ်ဦးချင်းနဲ့ဆိုင်တယ်။
မိမိရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကို မြတ်နိုးဖို့လိုအပ်သလို တစ်ဖက်သားရဲ့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကို လေးစားဖို့ လိုတယ်။ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဆိုတာဟာ အင်မတန်မှ သိမ်မွေ့တဲ့၊ လေးနက်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်တော်ဗုဒ္ဓရဲ့ သွန်သင်ဆုံးမမှုတွေကို ယုံယုံကြည် ကြည်နဲ့ လိုက်နာကျင့်သုံးနေသလို အခြားဘာသာဝင်တစ်ဦးရဲ့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကိုလည်း အသိအ မှတ်ပြုရမယ်။
မိမိဘာသာကောင်းတယ်။ တခြားဘာသာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ မရှိသင့်ဘူး။ အစွန်း တရားတွေကို ရှောင်ရှားဖို့သိပ်လိုအပ်နေပါတယ်။ အခုလိုပြောတာကို လက်မခံတဲ့သူတွေရှိမှာ သေချာ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ မြင့်မြတ်တဲ့အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆတွေ လူတွေမှာရှိကြ တယ်။ ရှိနိုင်တယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
နောက်ဆုံး ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုက မျက်မှောက်ခေတ် (၂၁) ရာစုမှာပိုပြီး အရေးကြီးလာတာတွေ့ရ ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့် ကမ္ဘာကြီးနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံလာကြတယ်။ ပူးပေါင်းဆက်ဆံမှုဆိုတာကို လက်ခံလာကြတယ်။
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကြောင့် နိုင်ငံခြားသား တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ မြန်မာပြည်မှာ တည်ထောင်လာကြတယ်။ အခုလိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ စီစဉ်တဲ့အခါ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေကို ရှာဖွေကြတယ်။ အကူအညီတောင်းကြတယ်။ ဒီလိုပဲ မြန်မာပိုင်ကုမ္ပဏီတွေကလည်း နိုင်ငံခြားဝန်ထမ်းတွေကို ရွေးချယ်ခန့်ထားလာတာ တွေ့တယ်။ အခုလို ဆောင်ရွက်တာက နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေရဲ့ အခြေအနေကို သိအောင်ရယ်၊ ပြည်တွင်းအခြေအနေ တွေ နားလည်သဘောပေါက်အောင် Cultural Intelligence (CQ) လို့ခေါ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ပတ်သက် တဲ့ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုကို ပြုစုဖို့ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယဉ်ကျေးမှုမတူသူတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါ (CQ) ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ (CQ) မြင့်မားတဲ့သူ ဟာ မိမိရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုမြတ်နိုးသလို တစ်ဖက်သားရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကိုလည်း လေးစားဖို့လိုတယ်။ လက်နဲ့ထမင်းစားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေအနေနဲ့ တူနဲ့စားတဲ့ တရုတ်လူမျိုး၊ ဇွန်း၊ ခရင်းသုံးတဲ့ အနောက်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အလေ့အထကို ဂရိုစိုက်ရမယ်။ (CQ) မြင့်မားတဲ့သူဟာ ယဉ်ကျေးမှုမ တူတဲ့ အခြေအနေမှာ လိုက်လျောညီထွေစွာ လှုပ်ရှားနိုင်သူဖြစ်တယ်။ ဝင်ဆံ့တယ်။ နားလည်တယ်။ အသိအမှတ်ပြုတယ်။
ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုတစ်ရပ်ကို အကျဉ်းချုံးတင်ပြရရင် PQ, IQ, EQ, SQ နဲ့ CQ တို့ဖြစ်တယ်။ ဒီဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှု ငါးခုဟာလူတစ်ယောက်အတွက် အလွန်အရေးပါလှပါတယ်။ PQ မြင့်မားမှု ဟာ အသက်ရှင်သန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး IQ ဟာ သင်ယူ၊ ခံယူမှုနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ EQ ကတော့ မေတ္တာ တရားနဲ့ဆိုင်ပြီး SQ ကတော့ လူတစ်ဦးရဲ့လေးနက်တဲ့ အမွေအနှစ်နဲ့ ဆိုင်တယ်။ CQ ကတော့ မတူညီ မှုကို အားယူနိုင်တဲ့ အားပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ အခွင့်အရေးရတိုင်း လူငယ်တွေရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမြင့်မားစေလိုတယ်။ အောင်မြင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်စေချင်တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အခွင့်အရေးရတိုင်း ဟောပြောပွဲတွေလုပ်ပေး ခဲ့၊ စာတွေရေးခဲ့တယ်။ အမှန်တော့ လူငယ်တွေသာမက လူလတ်၊ လူကြီးအားလုံး ဉာဏ်ရည်ထက် မြက်မှုငါးရပ်ကို ပြည့်စုံနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုအပ်ပါတယ်။
NLD အမတ် ၁၄ ဦးကို ပြည်နယ်နှင့်တုိုင်းဝန်ကြီးချုပ် များအဖြစ် အတည်ပြု ခန့်အပ်ပြီ
ရွေးကောက်ခံသမ္မတ ဦးထင်ကျော်က အမျိုးသားဒီမုိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်( NLD)မှ ပြည်နယ်နှင့် တုိုင်းဒေသ ကြီး လွှတ်တော်အမတ် ၁၄ ဦးကို ပြည်နယ်နှင့်တုိုင်းဒေသကြီးအစုိုးရ ၀န်ကြီးချုပ် များအဖြစ် သက်ဆုိုင်ရာ လွှတ်တော် များသုို့ တင်သွင်းပြီး အတည်ပြုခန့်အပ်လုိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်နှင့်တုိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ၁၄ ဦး၏ ကို်ယ်ရေးရာဇ၀င်များကို စုစည်းဖော်ပြ လုိုက်ပါသည်။
ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာခက်အောင်●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ကချင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် အဖြစ် ရွေးချယ်ခံထားရသူ ဒေါက်တာခက်အောင်သည် အသက် ၆၉ နှစ် ရှိပြီဖြစ်ပြီး အဘ ဦးခက်လ နှင့် အမိ ဒေါ်အင်လမ်းပရီ ၏ သားတဦးဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာခက်အောင်သည် ကချင်လူမျိုး၊ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တဦး ဖြစ်ကာ ခံတွင်းနှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန် တဦး အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
သူသည် ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ ကွတ်ခိုင်၊ ဗန်းမော်၊ တောင်ငူ၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ များတွင် အခြေခံ ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး ၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့၊ အ.ထ.က ( ၁) မှ တက္ကသိုလ်ဝင် အထက်တန်းစာမေးပွဲ ကို ဓာတုဗေဒ ဘာသာ ဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာခက်အောင်သည် ၁၉၇၃ ခုနှစ် တွင် ဒေါက်တာ ဂျေကော့ဘူ (မြို့နယ်ကျန်းမာရေး ဦးစီးမှူး) (ငြိမ်း) နှင့် အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ပြီး ဒေါက်တာ အိပ်ခ်ျဆိုင်းရာ၊ ဒေါက်တာ အိပ်ခ်ျမွန်းအောန် အမည်ရှိ သမီး နှစ်ဦး နှင့် ဒေါက်တာအိပ်ခ်ျ အောင်မိုင် နှင့် ဦးအိပ်ခ်ျထွယ်ဆပ်အောင် အမည်ရှိ သား နှစ်ဦး ထွန်းကားခဲ့သည်။
ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါက်တာဂျေကော့ဘူ နှင့် အတူ မြောင်းမြမြို့၊ လပွတ္တာမြို့နှင့် ပေါင်းတလည်မြို့များတွင် ကိုယ်ပိုင် ဆေးခန်းဖွင့် ကာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုခဲ့သည်။ထို့နောက် ၁၉၇၅ မှ ၁၉၉၃ ခုနှစ် အတွင်း မန္တလေး၊ ရန်ကုန်၊ မြစ်ကြီးနား နှင့် ဗန်းမော်မြို့များတွင် ရှိသည့် ပြည်သူ့ဆေးရုံ၊ ဒေသန္တရကျန်းမာရေးကျောင်း ကျန်းမာရေးဌာ နများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၃ ခုနှစ် သြဂုတ် ၁၆ ရက်တွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန မှ နုတ်ထွက်ခွင့် ရရှိခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ကယားပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးအယ်လ်ဖေါင်းရှို●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ကယားပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာသူ ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှို မှာ B.Ed ပညာရေးဘွဲ့ ကို ရရှိထားသူ ဖြစ်ပြီး မယ်စဲ့ မြိုနယ်တွင် လက်ထောက်ပညာရေးမှူး မှ ပညာရေးမှူးအထိ အဆင့်ဆင့် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှို သည် ၂၀၁၅ခုနှစ် ဇွန်လတွင် မြို့နယ်ပညာရေးမှူး အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ကာ NLD ပါတီ သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို မယ်စဲ့မြို့နယ် ပြည်နယ် လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) မှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်ဟု သိရသည်သူ၏ ဇနီးဖြစ်သူမှာ မယ်စဲ့မြို့နယ် အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း မှ အလယ်တန်းပြ ဆရာမ ဒေါ်မြင့်မြင့်မော် ဖြစ်ပြီး သား ၂ ဦး ထွန်းကားခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် မိသားစု နှင့်အတူ ကယားပြည်နယ်၊ မယ်စဲ့မြို့နယ် တောင်ပိုင်းရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်လျက်ရှိသည်။
ကရင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်သည် ကရင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးဟောင်း ဒေါက်တာစောလှထွန်း၏ သမီးတဦးဖြစ်သည်။
ကရင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာသည့် ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့် သည် ၁၉၇၅ ခုနှစ် တွင် ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်တွင် ဒုတိယနှစ်အထိ ပညာသင်ကြားခဲ့သူဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ပညာသင်ကြားနေချိန်အတွင်း ကျောင်း သား လှုပ်ရှားမှုအတွင်း ပါဝင်သည်ဟုဆိုကာ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရပြီး ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည် လွတ်မြောက် ခဲ့သည်။
သူသည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းအခြေခံ ဥပဒေ ကို ဆန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့်၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက် မယှဉ်ပြိုင်ဘဲ သပိတ်မှောက်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ထို့နောက်၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ တွင် ကရင်ပြည်နယ်မှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကာ အနိုင်ရခဲ့သူဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် NLD ပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ကရင်ပြည်နယ် NLD ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန်ယူထားသူ ဖြစ်သည်။ ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်သည်၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကရင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အနိုင်ရခဲ့ကာ ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ချင်းပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဆလိုင်လျန်လွယ်●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ချင်းပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဆလိုင်းလျန်လွယ် သည် ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းမြို့နယ် အိုင်ရီဘွယ်ရွာ ဇာတိဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဥပဒေပညာဘွဲ နှင့် ဘွဲ့လွန် ပညာရေး အဖြစ် ဘာသာရေးဘွဲ့ BRE တို့ကို ရရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူသည် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘဝတွင် ဆလိုင်း-မိုင် လှုပ်ရှားမှုကဲ့သို့သော ချင်းကျောင်းသား လှုပ်ရှားမှုများတွင် ဆလိုင်းရမ်လိန်မှုန်း၊ ဆလိုင်းကစ်ပ်ခိုလျန်တို့ နှင့်အတူ တက်ကြွစွာ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သူဖြစ်သည်။
ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ အစိုးရအမှုထမ်းအဖြစ် ရန်ကုန်မြို့ ဗဟိုဥပဒေရုံး ၊ ကလေး၊ ဖလမ်း၊ မင်းတပ်၊ မတူပီ၊ မန္တလေး၊ အမရပူရနှင့် စဉ့်ကိုင် မြို့တို့တွင် ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးပြီး တမူးခရိုင် ဥပဒေအရာရှိအဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD ပါတီ မှ ဖလမ်းမြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် အမှတ် ၂ တွင် ဝင်ရောက် အရွေးချယ်ခံပြီး အနိုင်ရရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။
ချင်းပြည်နယ် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဒုဥက္ကဋ္ဌများ ဖြစ်ကြသော ဦးဇိုဘွဲနှင့် ဦးအောင်တမ်တို့၏ လွှတ်တော်တွင် ကျမ်းသစ္စာ ပြုလုပ်ရာတွင်လည်း လွှတ်တော် သဘာပတိအဖြစ် ဦးဆောင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။
မွန်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမင်းမင်းဦး●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ဦးမင်းမင်းဦး သည် ၁၉၇၀ ခုနှစ် သြဂုတ် ၉ ရက်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး အသက် ၄၆ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။ မွန်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမင်းမင်းဦး သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဘီးလင်းမဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၂ မှ အနိုင်ရရှိထား သော ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်သည်။ မွန်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြောက်ခံထားရသူလည်းဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် မှ အီလက်ထရွန်နစ်အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ရတဦးဖြစ်ကာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများအဖြစ် ရာဘာခြံလုပ်ငန်း၊ မုန့်တီလုပ်ငန်း နှင့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အရောင်းဆိုင် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ သူသည် ၁၉၈၈ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီ အရေးလှုပ်ရှားမှု တွင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တဦးအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် ဘီးလင်းမြို့နယ် NLD ပါတီ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသူ ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပု●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ဦးညီပုသည် အမျိုးသားဒီမုိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် စတင်တည်ထောင်ကတည်းက ပါဝင်ခဲ့ပြီး NLD ဗဟုိုအလုပ် အမှုဆောင်တဦးဖြစ်သည်။ ဦးညီပု သည် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးနောက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် တွင် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။ အခက်အခဲများကြားမှ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲစွာ ရုန်းကန်ရင်း NLD တွင် နုိုင်ငံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် ဂွမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကာ အနိုင်ရခဲ့သူဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ၀န်ကြီးချုပ် အဖြစ် ခန့်အပ်ရန် အဆုိုပြုချိန်တွင် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီမှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်များ လွှတ်တော်ထဲမှာ ထွက်ခွာ ဆန္ဒပြခြင်းကို ကြုံတွေ့ရသူလည်းဖြစ်သည်။
ရှမ်းပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်သည် ၁၉ ၆၀ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားသူဖြစ်ပြီး အသက် ၅၆ နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာလင်းထွဋ်သည် ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် ဒေသကောလိပ်မှ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန် အတတ်ပညာဒီပလိုမာ ရရှိခဲ့ပြီး ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးပညာဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှစတင်ကာ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၄ မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အထိ လားရှိုးမြို့ ပြည်နယ်ဆေးရုံကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကာ မန္တလေး၊ လားရှိုးမြို့တို့တွင် မူးယစ်ဆေးနှင့် ကူးစက်တတ်သော AIDS ရောဂါလျော့ချရေးစီမံချက်အရာရှိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
သူသည် လူမှုကူညီရေးအသင်းများ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံအငြိမ့်အဖွဲ့တွင် လူရွှင်တော် ပလာယာ အဖြစ်နာမည်ကြီးသူဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် လားရှိုးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ အနိုင်ရရှိခဲ့သူ ဖြစ် သည်။ ပရဟိတ လုပ်ငန်းများစွာတွင်လည်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ် လွှတ်တော် အမတ် အဖြစ် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် အနုိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကို ၁၉ ၆၉ ခုနှစ် ၊ ဧပြီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး အသက်၄၇ နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် NLD ပါတီ၏ လှည်းကူးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၂ မှအနိုင်ရရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။
သူသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မှ ရူပဗေဒဘာသာရပ် ကို ဒုတိယနှစ်အထိ သင်ကြားခဲ့ပြီး ၁၉၈၈-၈၉ ခုနှစ်တွင် ဟံသာဝတီခရိုင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူခဲ့ကာ သန်လျင် မြို့ လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် မန်းဂျော်နီ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ကရင်တိုင်းရင်းသားတဦးဖြစ်ပြီး ဧရာဝတီတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာခဲ့သူ မန်းဂျော်နီကို ၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင် ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်၊ ဆင်ဂေါင်းကြီး ကျေးရွာ၌ အဖ ဦးကျော်ဦး နှင့် အမိ ဒေါ်စီစီလျား တို့က မွေးဖွားခဲ့သည်။
အသက် ၇၄ နှစ် အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သည့် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် မန်းဂျော်နီ မှာ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှ ဘီအေဘွဲ့နှင့် ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်မှ Dip.Ed. ပညာရေးဘွဲ့ ရရှိထားသူဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှု အနေဖြင့် ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှ စတင်၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ပါတီမှ နှုတ်ထွက်ရန် စစ်အစိုးရ၏ ဖိအားပေးခဲ့မှုကို ငြင်းဆန်သည့်အတွက် အကြိမ်ကြိမ် ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်းခံခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်။
၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် NLD ပါတီ၏ ကျုံပျော်မြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မြောင်းမြမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကျုံပျော်မြို့နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး အမှတ် ၂ ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်လည်းကောင်း ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း ခံခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာမြင့်နိုင်●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●စစ်ကိုင်းတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာသူ ဒေါက်တာမြင့်နိုင်သည် ၁၉၉၀ ခုနှစ် ကာလ ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD ပါတီ ဝင်အဖြစ် ကန့်ဘလူမဲဆန္ဒနယ် မှ အနိုင်ရခဲ့သူ ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်သည်။
ထို့သို့ ဆမ လက်မှတ် သိမ်းဆည်းခံခဲ့ရပြီးနောက် ထီလက်မှတ်များ ရောင်းချခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုခဲ့သည်။ သူရောင်းချသည့် ထီလက်မှတ်များ ကို မဝယ်ကြသဖြင့် ဆေးခန်းများ၊ ဆေးရုံများရှေ့တွင် ကလေးကစားစရာ ပူပေါင်းများ ရောင်းချခဲ့ရသည်။
ဒေါက်တာမြင့်နိုင်သည် ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်လည်းကောင်း ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အနိုင်ရခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
သူသည် အမျိုးသားလွှတ်တော် အာဆီယံ နိုင်ငံရေးနှင့် လုံခြုံရေး အသိုက်အဝန်းဆိုင်ရာ ကော်မတီ နှင့် တောင်သူလယ်သမား ရေးရာ ကော်မတီ အဖွဲ့ယင်အဖြစ် လည်း ပါဝင်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်း●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာသည့် ဦးဝင်းသိန်း သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ ပါတီ၏ ရေတာရှည်မြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၂ မှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အနိုင်ရခဲ့သူဖြစ်သည်။
တနသာင်္ရီ တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာမည့် ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် သရက်ချောင်း မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၁ မှ အနိုင်ရရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။ မိဘနှစ်ပါး မှာ တပ်မတော် (ရေ) အငြိမ်းစား ဖြစ်သူ ဦးမောင်မောင် နှင့် အထက်တန်းပြဆရာမ ( အငြိမ်းစား ) ဒေါ်ယဉ်ကြည် ဖြစ်သည်။
သားသမီးများမှာ မောင်သန့်ခင်မောင်၊ ဒေါက်တာ ကြည်မြတ်မော်(နေပြည်တော် ကုတင် ၁၀၀၀- လက်ထောက်ဆရာဝန်)၊ မောင်သန့်ထွေးမော် (တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား) နှင့် မရွှန်းလဲ့ရည်မင်း (ကျောင်းသူ) တို့ဖြစ်သည်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညို●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာသည့် ဒေါက်တာအောင်မိုးညို မှာ ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် ဆေးတက္ကသိုလ် ၁ ရန်ကုန် မှ ဆရာဝန်ဘွဲ့ ရရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူသည် ကိုယ်ပိုင်ဆေးခန်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပွင့်ဖြူမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၂ မှ အနိုင်ရရှိခဲ့သည် ဟု သိရသည်။ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု ဖြင့် ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပွင့်ဖြူမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ထပ်မံ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ထို့နောက် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကာ အနိုင်ရရှိထားသူဖြစ်ခဲ့ပြီး တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာသူ ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင်သည် ဆရာဝန်တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး မန္တလေး ဆေးတက္ကသိုလ်တွင် ဇီဝဓာတု ဘာသာရပ် သရုပ်ပြ ဆရာတဦး အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံတွင် တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။သူသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမရပူရ မြို့နယ် ကိုယ်စားပြု ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ထိုစဉ် က စစ်အစိုးရ ၏ လွှတ်တော် ခေါ်ပေးရန် ပျက်ကွက်မှုများကြောင့် နိုင်ငံရေး တင်းမာမှုများ ရှိလာခဲ့ရာ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကို စင်ပြိုင် အစိုးရ တည်ထောင်သည်ဟု စစ်အစိုးရ က စွပ်စွဲသည် အတွက် အင်းစိန် စစ်ခုံရုံး တွင် တရားစွဲဆိုခံရကာ ထောင်ဒဏ် ၂၅ နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်။
သူသည် NLD ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်ပွဲ တွင် သုံးထပ်ကွမ်း အနိုင်ရထားသူ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် NLD ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပူးတွဲကာ ပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အဖြစ် တာဝန် ပေးအပ်ခံထားရသူ ဖြစ်သည်။
ယနေ့ထိတိုင် လူအများမမေ့ကြသေးသည့် သတင်းစာဆရာဟု ဆိုပါလျှင် ဦးချစ်မောင်ကိုပင်ပြရပေမည်။
၁၉၃၀ပြည့်နှစ်တစ်ဝိုက်မှစ၍ ယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်သူ ၊ တည်ကြည်သူ ၊ မျိုးချစ်စိတ်ပြင်းထန်သူအဖြစ် ကျော်ကြားခဲ့သော သတင်းစာဆရာကြီးဖြစ်သည်။ ဂျာနယ်ကျော်သတင်းစဉ် ကို ဦးစီးထုတ်ဝေခဲ့သဖြင့် ဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင် ဟူ၍ လူသိများလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးချစ်မောင်သည် သတင်းစာဆရာဆိုသော်ငြား သတင်းစာအတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေရုံတင် မဟုတ်ပဲ တိုင်းရေးပြည်ရေး ကိစ္စများကိုလည်း စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာ မှတ်သားနေသူဖြစ်သည်။ ဒီအကြောင်းနှင့်ပတ်သတ်၍ ဦးချစ်မောင်က "အယ်ဒီတာဆိုတာ အကုန်နှံ့စပ်ရတယ်။ လွှတ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ ၀န်ကြီးတွေထက် အုပ်ချုပ်မှုကိုနားလည်ရင် ပိုကောင်းတယ်။ တိုင်းပြည်ကောင်းရာကောင်းကြောင်းဖြစ်အောင် တိုင်းပြည်ပေါ်မှာ တိုင်းပြည်ဘက်ကနေပြီး အမှားအမှန် လမ်းမှန်ညွှန်ပြနေရတဲ့ အယ်ဒီတာဟာ သူတို့ထက်အရည်အချင်း ညံ့လို့မဖြစ်ဘူး" ဟု ပြောဖူးသည်။
တစ်နေ့ဦးချစ်မောင်ကို ရန်ကုန်ပုလိပ်မင်းကြီးက သူ၏ ရုံးခန်းသို့လာခိုင်းရာ သတင်းထောက်တစ်ယောက်ကိုသာ စေလွှတ်လိုက်သည်။ ပုလိပ်မင်းကြီးက သတင်းထောက်ကို အလိုမရှိ ၊ အယ်ဒီတာချုပ်သာ အလိုရှိကြောင်း ကြိမ်းမောင်းပြောဆို၍ ပြန်လွှတ်လိုက်သည်။ နောက်တစ်နေ့တွင် ပုလိပ်မင်းကြီးရုံးခန်းသို့ ဦးချစ်မောင်သွားတွေ့၏။ ပင်နီအင်္ကျီဝတ်ကာ မျက်မှန်ထူထူတပ် ခုံဖိနပ်ကို တဂွပ်ဂွပ်နင်းသွားရာ အယ်ဒီတာချုပ်ဟု မထင်သဖြင့် ပုလိပ်မင်းကြီးက "မောင်မင်းဘယ်သူလဲ" ဟု အသံခပ်မာမာနှင့် မေးလေသည်။ ထိုင်စရာပင် မပေးသဖြင့် ဦးချစ်မောင်လည်း မပြောမဆိုနှင့် ကုလားထိုင်တစ်လုံးတွင် ထိုင်လိုက်ပြီး မိမိသည် မြန်မာ့အလင်း အယ်ဒီတာချုပ်ဖြစ်ကြောင်း အင်္ဂလိပ်လိုပြောလိုက်သည်။
အယ်ဒီတာချုပ် ဖြစ်သဖြင့် အရင်သတင်းထောက်လို အောက်ငေါက်ထုတ်ဖို့လည်း မဖြစ်သဖြင့် ပုလိပ်မင်းကြီးသည် ဒေါကြီးမောကြီးနှင့် အမိန့်စာတစ်စောင်ကို သတင်းစာတွင် ထည့်ရန်ပြောဆိုပြီး ပေးလိုက်သည်။ သို့သော် နောက်တစ်နေ့တွင် ထိုအမိန့်စာ ပါမလာခဲ့။ ထို့ကြောင့် အာမခံငွေတင်၍ ဒဏ်ငွေဆောင်ခဲ့ရသည်။ ဦးချစ်မောင်သည် ထိုသို့သောလူမျိုးဖြစ်သည်။ မဟုတ်မမှန် အမိန့် သတင်းများကို
သူ့သတင်းစာတွင် ထည့်ရန်ဘယ်တော့မှ အလိုမရှိသူဖြစ်သည်။
တစ်ခါကလည်း မြန်မာ့အလင်းက ဦးချစ်မောင်အား ထုတ်ပယ်ခဲ့ဖူးသည်။ ထုတ်ရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာ သတင်းစာသမားပီသစွာ အမှန်တရားဘက်မှ ရပ်တည်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထားဝယ်သွားသည့် "အဒမ်ဆင်" သင်္ဘောကြီး အနီးဗုံးပေါက်ကွဲမှုသတင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ အစိုးရက "မှားယွင်းကြောင်းဖြေရှင်းချက်" အား သတင်းစာတွင် ထည့်ရန်ပြောရာ ဦးချစ်မောင်က သတင်းမှာ ခိုင်လုံ၍ ယုံကြည်စိတ်ချရသော သတင်းဖြစ်ကြောင်း ၊ သတင်းစာတွင် ဖြေရှင်းချက်ထည့်ရခြင်းမှာ သတင်းစာအတွက် အနာဆုံးကိစ္စဖြစ်ကြောင်းပြောပြီး သတင်းစာတွင် ဖြေရှင်းချက်ကို လုံးဝမထည့်ခဲ့။ အစိုးရတင်မက သတင်းစာတိုက် မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာကလည်း ဖိအားပေးသည်။ သို့သော်ဦးချစ်မောင်က သတင်းစာကို တိုက်ရှင်များက ပိုင်သော်လည်း တိုင်းပြည်ကသာ ဆိုင်သဖြင့် ဤကဲ့သို့ မဟုတ်မမှန်သတင်းများကို လုံးဝမထည့်နိုင်ဟု အတိုက်အခံပြောကာ အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့သည်။ ထိုညတွင်ပင် သတင်းစာတိုက်မှ ဦးချစ်မောင်အား အလုပ်ထုတ်လိုက်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
သို့သော် ဦးချစ်မောင်က မြန်မာ့အလင်းအား အငြိုးမထားခဲ့။ မိမိဘာသာ ဂျာနယ်ကျော်သတင်းစဉ်ကို ဦးစီးလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ အစိုးရက မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတိုက်ကြီးမှရေးသားလိုက်သည့် "အိုင်စီအက်စ်များ"
ဟူသောခေါင်းကြီးကြောင့် မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ကာ တစ်ချက်လွှတ်အမိန့်ဖြင့် မြန်မာ့အလင်းတိုက်အား ပိတ်ခိုင်းခဲ့သည်။ ထိုအခါ ဦးချစ်မောင်က ဂျာနယ်ကျော်မှနေ၍ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာအတွက် အစိုးရအပေါ် ပြင်းထန်လှသော ခေါင်းကြီးများကို ရေးခဲ့ကာ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ ပြန်လည်ထုတ်နိုင်ရန် ကူညီကြိုးပမ်းအားထုတ်ပေးခဲ့သည်။
Ref: သိသင့်သိစရာ သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်များစွာ - နန္ဒာမိုးကြယ် မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း
နိုင်ငံတော် သမ္မတအဖြစ် ဦးထင်ကျော်အား ရွေးချယ်တင်ေမြှာက်
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ တင်မြှောက်သော ဒုတိယသမ္မတများဖြစ်ကြသည့် ဦးထင်ကျော်၊ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူနှင့် တပ်မတော်မှ တင်မြှောက်သော ဒုတိယ သမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေတို့ သုံးဦးအနက် တစ်ဦးကို နိုင်ငံတော် သမ္မတအဖြစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက လျို့ဝှက် ဆန္ဒမဲပေးခြင်းဖြင့် မဲခွဲရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဦးထင်ကျော်က ထောက်ခံဆန္ဒမဲ ၃၆၀ မဲ၊ ဦးမြင့်ဆွေက ထောက်ခံဆန္ဒမဲ ၂၁၃ မဲ၊ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူက ထောက်ခံဆန္ဒမဲ ၇၉ မဲရရှိခဲ့ကြသည်။
ထို့ကြောင့် ထောက်ခံမဲ အများဆုံးရရှိသူ ဦးထင်ကျော်သည် နိုင်ငံတော် သမ္မတဖြစ်၍ ဦးမြင့်ဆွေသည် ဒုတိယသမ္မတ-၁ နှင့် ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူသည် ဒုတိယ သမ္မတ-၂ တို့ဖြစ်လာကြသည်။
ယခုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသည့် နိုင်ငံတော် သမ္မတနှင့် ဒုတိယ သမ္မတများသည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ကတိသစ္စာပြုပြီးနောက် နိုင်ငံတော် သမ္မတတာဝန်နှင့် ဒုတိယသမ္မတတာဝန်များကို လွှဲပြောင်းထမ်းဆောင်ကြမည်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရသော ဦးထင်ကျော်သည် ၎င်း၏ အစိုးရအဖွဲ့တွင် ပါဝင်မည့် ဝန်ကြီးများစာရင်းကို မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်း ပြည်ထောင်စုကိုတင်ပြကာ လွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက်ကိုရယူရမည်ဖြစ်သည်။
၃ ဦး ရဲ့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းများ
ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးထင်ကျော်မှာ ဦးဝန်(စာရေးဆရာကြီး
မင်းသုဝဏ်)-ဒေါ်ကြည်ကြည်တို့၏ သားဖြစ်ပြီး ၁၉၄၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်တွင် ကွမ်းခြံကုန်းမြို့၌
သည်။ ဦးထင်ကျော်သည် ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၇
ပညာဘွဲ့နှင့် ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် မဟာဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်
ခုနှစ်တွင် အစိုးရဝန်ထမ်းတစ်ဦးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး
ထမ်းဆောင်ခဲ့ကာ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင်ျ နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ ဦးထင်ကျော်သည်
အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်ကာ ၎င်း၏ဇနီးမှာ
ဆက်ဆံရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်စုစုလွင်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယသမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသူ တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူသည်
သားတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ဦးလျံတလုံး-ဒေါ်ငွန်ပါးရ်တို့၏ သားဖြစ်ကာ ၁၉၅၈ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၉
ထန်တလန်မြို့နယ် သီကီးရ်ကျေးရွာ၌ မွေးဖွားသည်။ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူသည်
တက္ကသိုလ်တို့တွင် ပညာဆည်းပူးခဲ့ပြီး B.ဗ (Dငစ ငည Lတေ)ဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။
တပ်မတော်မှ အမှတ်(၁) စက်မှုဝန်ကြီးဌာနသို့ ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်၍ ထိုမှ
၎င်းသည် အိမ်ထောင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဇနီးမှာ ဒေါက်တာ ဆွေလွမ်းဖြစ်ကာ သားနှစ်ဦး၊
ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသူ နောက်တစ်ဦးမှာ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး
ဖြစ်သည်။ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်ဆွေ (အငြိမ်းစား)သည် ဦးကြီးမောင်-ဒေါ်ကြည်တို့၏
သားဖြစ်ပြီး ၁၉၅၁ ခုနှစ်
ဇွန်လ ၂၄ ရက်တွင် မန္တလေးမြို့၌ မွေးဖွားသည်။ စစ်တက္ကသိုလ်အမှတ်စဉ် (၁၅)သို့ ၁၉၇၁
ခုနှစ်တွင် တက်ရောက် ခဲ့ပြီး တပ်မတော်တွင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်ထိ
တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကာ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် တပ်မတော်မှ
အငြိမ်းစားယူခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်
အိမ်ထောင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်ကာ သားတစ်ဦး၊ သမီးတစ်ဦး ထွန်းကားသည်။
ပြည်သူတွေစေတနာကြောင့် ကျွန်တော်သမ္မတဖြစ်လာတာပါ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ထိုသို့မေးမြန်းခဲ့မှုအပေါ် တရုတ်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက “မြန်မာနိုင်ငံ ဒုတိယအကြိမ်ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှ ဦးထင်ကျော်အား နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ခြင်းအတွက်တရုတ်နိုင်ငံက ဂုဏ်ပြုဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ တရုတ်နဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံတို့ဟာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကောင်းဖြစ်တဲ့အလျောက် ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ချစ်ကြည်မှုအစဉ်အလာ ပိုမိုခိုင်မာလာစေရန်အတွက် ဘက်ပေါင်းစုံမှပူးပေါင်းမှုများကို လက်တွေ့ကျကျ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းဟာ နှစ်နိုင်ငံနဲ့ နှစ်နိုင်ငံပြည်သူလူထုအတွက် တူညီသောဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တရုတ်နိုင်ငံဟာ မြန်မာအစိုးရသစ်နဲ့လက်တွဲပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို အားသစ်လောင်းပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ထားကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ချစ်ကြည်ရေးမူဝါဒကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးဖြစ်စဉ်အတွက်ကြိုးပမ်းမှုအားလုံးကိုထောက်ခံအားပေးမည်ဖြစ်ကာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တို့၏လက်တွဲကြိုးပမ်းမှုဖြင့် တရုတ်-မြန်မာ ဘက်စုံမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမိတ်ဖက်ဆက်ဆံမှုကို ပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မြဲလာစေနိုင်မည်ဟုယုံကြည်ထားပါတယ်“ ဟုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
မတ်လ ၉ ရက်နေ့ မနက် ၆း၃၀ နာရီလောက်စပြီး တစ်နာရီနီးပါးလောက် နေကြတ်ပါတယ်။
မန္တလေးကနေ နေလုံးဝကြတ်တာကိုတော့ မတွေ့ရပါဘူး။
အယ်နီညိုလ်လို့ အော်နေကြတော့ ဒီနှစ်နွေအရမ်းပူမှာကို စိုးရိမ်နေမိတယ်။
ရာသီဥတုတွေ ဖောက်ပြန်နေတော့လည်း ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။
ပူသည်ဖြစ်စေ အေးသည်ဖြစ်စေ ဂရုစိုက်ရမှာက ကိုယ့်အပိုင်း။
ဒီရက်ပိုင်းမှာ မန္တလေးမှာ အပူချိန် သိသိသာသာတိုးလာတယ်။
မနက်စောစောနဲ့ ညပိုင်းမှာတော့ နေလို့ထိုင်လို့ အဆင်ပြေနေသေးတယ်။
နေ့အပူချိန်တိုးလာတော့ နေ့ခင်းပိုင်းဆိုရင် အပြင်တောင် မထွက်ချင်တော့ဘူး။
တဖြေးဖြေးနဲ့ ပူလာဦးမယ် .......................
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့က မူဆယ်က ပြန်ခဲ့တယ်။
လမ်းမှာ ကားစပြီးပိတ်တာနဲ့ ကြုံရတယ်။
ကိုယ်စီးလာတဲ့ ကားဆရာက စပယ်ယာနဲ့ အပေးအယူမျှလို့သာ ပုံမှန်ထက် ၃ နာရီလောက်ပဲ နောက်ကျခဲ့တယ်။
အဲဒီနေ့က စပိတ်လိုက်တာ ၄ ရက်လောက်ကို တက်မရ။ ဆင်းမရနဲ့ လမ်းတွေပိတ်ကုန်တယ်။
မတ်လ ၄ ရက်နေ့ကမှ အတက်၊ အဆင်းကို အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ သွားခိုင်းမှပဲ လမ်းက ပွင့်တော့တယ်။
အချိန်ပိုင်းနဲ့ အတက်တစ်ကြော၊ အဆင်းတစ်ကြောဆိုတော့ အချိန်ကုန်ပေမယ့် သွားလို့လာလို့တော့ ရတာပေါ့။
ဇန်န၀ါရီလတုန်းကလည်း ပိတ်တာ ၄ ရက်လောက်ကြာတယ်။
အခုလည်း ၄ ရက်လောက်ကြာအောင် ပိတ်နေတယ်။
တကယ်ဆိုရင် လမ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီက ပိတ်နေတာသိတာကို ချက်ခြင်း မရှင်းလင်းပေးတာဘူး။
မိုးရွာလိုက်ရင် ကားတွေ လမ်းချော်ပြီး ပိတ်ကုန်ရော။
အဲဒီတော့ အတက်တစ်လမ်း၊ အဆင်းတစ်လမ်းဖြစ်အောင် ဖောက်လိုက်ရင်တော့ အဆင်ပြေသွားလောက်မှာ။
ဒီလောက်လူပေါင်းများစွာ သွားလာနေတာကို လေယာဉ်ခရီးစဉ်လည်း စီစဉ်သင့်တယ်။